စတာလင်း အထူးတောက်ပခြင်းနဲ့ အတူ ဝက်စ်ဟမ်းကို ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်ပွဲစဉ်မှ မန်စီးတီး ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ - SPORTS MYANMAR
စတာလင်း အထူးတောက်ပခြင်းနဲ့ အတူ ဝက်စ်ဟမ်းကို ချေမှုန်းခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်ပွဲစဉ်မှ မန်စီးတီး ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ
မန်စီးတီး အသင်း ကတော့ ရာသီ သစ် စတင် တာနဲ့ အဖွင့် ပွဲစဉ် မှာပဲ ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း ကို5–0ဆိုတဲ့ ရလဒ် နဲ့ ဂိုးပြတ် ချေမှုန်း သွားခဲ့ ပါပြီ ။ အထူးသဖြင့် အသင်း ရဲ့ အားထား ရဆုံး ကစားသမား ဖြစ်သူ စတာလင်း ဟာ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှာ ဟတ်ထရစ် သွင်းယူ နိုင်ခဲ့ ခြင်းက ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အပျော် ကို ပိုပြီး တိုးပွား စေခဲ့ ပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲစဉ် မှာတော့ မန်စီးတီး အတွက် ဂျီးဆပ် ၊ စတာလင်း ( ဟတ်ထရစ် ) နဲ့ အဂူရို ( pen ) တို့က ကိုယ်စီ သွင်းယူ ပေးနိုင် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် မာရက်ဟာ လည်း အသင်း အတွက်2ဂိုး ဖန်တီး ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီပွဲ အတွက် တော့ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ စတာလင်း က ပွဲစဉ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်သွား ခဲ့ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး တို့ အမှတ်ပေး ဇယား ကို ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ ကြတဲ့ ဒီနေ့ ပွဲစဉ် မှ ကစားသမား တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တွေကို ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
Manchester City’s English midfielder Raheem Sterling (R) celebrates with team-mates after scoring their second goal during the English Premier League football match between West Ham United and Manchester City at The London Stadium, in east London on August 10, 2019. (Photo by Ian KINGTON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
အီဒါဆန် (7)
အသင်း အတွက် တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် လှတဲ့ ဂိုးပေါက် ကာကွယ် မှု အချို့ ပြုလုပ် ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပြီး ခံစစ် မှ ကစား ကွက်ကို တည် ကစား ပေးရာ မှာ ကောင်းမွန် တဲ့ အရည်အသွေး တွေကို ပြသ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ကိုင်လီ ဝေါ်လ်ကာ (7)
အသင်း အတွက် အရေး ပါတဲ့ အဖွင့် ဂိုးကို ဖန်တီး ပေးသွား ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကစားသမား သစ် ကန်ဆယ်လို အတွက် ပွဲထွက် ခွင့်ဟာ အလွယ်တကူ ရရှိ မှာ မဟုတ် ကြောင်း သတိပေး လိုက်ခြင်း ပါပဲ ။ အဝါကဒ် ပြသ ခံခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဂျွန်စတုန်း (7)
အသင်းဖော် တွေနဲ့ အချိတ်အဆက် မိစွာ ကစား ရင်း ပျော်ရွှင် ဖွယ် ကောင်းတဲ့ ပွဲ တစ်ပွဲ ပိုင်ဆိုင် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကောင်းမွန် တဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့ မှုတွေ ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ သလို အသင်း ရဲ့ ဂိုး ဧရိယာ အတွင်း လည်း အထူး ကောင်းမွန် ခဲ့ ပါတယ်။
လာပေါ်တေး ( 8 )
ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ နံပါတ် တစ် ဦးစားပေး ဗဟို ခံစစ် ကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း ခြေစွမ်း ကောင်းတွေ နဲ့ သက်သေ ပြသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အန်တိုနီယို ကို အကောင်းဆုံး ဟန့်တား သွားနိုင် ခဲ့သလို ဘောလုံး ယှဉ်လု မှု ၊ ဖျက်ထုတ် မှု တွေကို လည်း သေသေ သပ်သပ် လုပ်ဆောင် ပြသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဇင်ချန်ကို (7)
မန်စီးတီး အသင်း မှာ တစ်စ ထက် တစ်စ နေရာ ရလာ တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပြီး ခြေစွမ်း လျော့ကျ သွားခြင်း မရှိတဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ လာပေါ်တေး နဲ့ စတုန်း တို့ကို တစ်ကယ့် အထောက်အပံ့ ကောင်းတွေ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
ရိုဒရီ ( 8 )
ကစားသမား သစ် ဖြစ်နေ ပေမယ့် အသင်း အတွက် တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန်စွာ ကစား ပြသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်း မှာ အထိုင်ကျ လာတာ နဲ့ အမျှ ပိုကောင်း လာမဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ။ ဘောလုံး ပေးပို့ ရာမှာ အမှား အနည်းငယ် ရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ဒေးဗစ် ဆေးလ်ဗား (6)
အသင်း ခေါင်းဆောင် ဆေးလ်ဗား ကတော့ ခံစစ် ပိုင်းဖက် ဦးစားပေး ကစား ခဲ့ပြီး အသင်းဖော် ဒီဘရိုင်း ကို တိုက်စစ် တက် ကစား ဖို့ ကူညီပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ကယ်ဗင် ဒီဘရိုင်း (7)
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက ဒဏ်ရာ တွေ အကြား ရုန်းကန် နေခဲ့ ရတဲ့ ဒီဘရိုင်း ဟာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်း တွေနဲ့ ပြန်လာ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ စတာလင်း အတွက် ဂိုး ဖန်တီး ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
West Ham United’s Paraguayan defender Fabián Balbuena (L) chases Manchester City’s Belgian midfielder Kevin De Bruyne (R) during the English Premier League football match between West Ham United and Manchester City at The London Stadium, in east London on August 10, 2019. (Photo by Ian KINGTON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
မာရက်ဇ် ( 8 )
ညာ တောင်ပံ တစ်လျောက် မှာ အထင် ကြီးဖွယ် ခြေစွမ်း ကောင်းတွေ ပြသ သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဖေဘယန်စကီး ကိုလည်း ဒုက္ခ တွေ ပေးသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ အသင်း အတွက် သွင်းဂိုး2ဂိုးကို ဖန်တီး ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
စတာလင်း ( 10 )
ချွင်းချက် မရှိ ပွဲစဉ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ သူဟာ ပွဲ ကစား ချိန် တစ်လျောက် အထူး ခြေစွမ်း ကောင်းတွေ ပြသ နိုင် ခဲ့ပြီး ဒီ ရာသီ ပရီးမီးယား လိဂ်ရဲ့ ပထမဆုံး ဟတ်ထရစ် ဂိုးသွင်းရှင် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အဝါကဒ်ပြား ပြသ ခံခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဂျီးဆပ် (9)
တစ်ကယ့် ကို ကောင်းမွန် တဲ့ အဖွင့်ဂိုး ကို သွင်းယူ ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ သူဟာ ပွဲချိန် တစ်လျောက် တိုက်စစ် ပိုင်းတွေ သာ မက လိုအပ် တဲ့ အချိန် ကောင်းမွန် တဲ့ လုပ်အား တွေနဲ့ အတူ ခံစစ် အထိ ပါ ဆင်းကူ ကစားပေး သွားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
လူစားဝင် ကစားသမား များ …
အဂူရို (6)
ဂန်ဒိုဂမ် (6)
ဖိုဒန် (6) တို့ပဲ ဖြစ်ကြ ပါတယ် ။